प्रवास – Epublicnews.com
Sunday, October 28th, 2018 Comments
एजेन्सी । श्रीलंकामा राष्ट्रपतिले मन्त्रीलाई नै बन्धक बनाउन खोजेपछि गोली चलेको छ । श्रीलंकामा चलेको राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेका छन् भने सभामुखले राष्ट्रपतिले तोकेका ब्यक्तिलाई
काठमाडौं, ११ कात्तिक । नेपाली कामदारका लागि मुख्य गन्तब्य स्थान रहेको मलेसियासंग सोमवार महत्वपुर्ण सम्झौता हुने भएको छ । ठँगिदै आएका नेपाली कामदारका पक्षमा सरकारले चालके कठोर कदमले ऐतिहाँसिक सफलता प्राप्त
एजेन्सी । वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका महिलाहरु बिच चक्कु हानाहान हुँदा एक नेपाली महिलाको ज्यान गएको छ । घटनामा अन्य तिन महिला घाइते भएका छन् । नुवाकोटकी सोनी तामाङले प्रहार
भिसाबिना १ सय ८४ महिलालाई श्रम स्वीकृति दिने भ्रष्ट कर्मचारी मन्त्री विष्टको फन्दामा परेपछि
Friday, October 26th, 2018 Comments
काठमाडौँ, ९ कात्तिक । एक सय ८४ जना महिलालाई भिसा बिनानै श्रम स्वीकृति दिने श्रम कार्यालयका २५ कर्मचारी सहित २७ जना कारवाहीको दायरामा परेका छन् । उनीहरुलाई भ्रष्ट आचरण भएका भन्दै
७० र ७५ वर्षीया बृद्ध दिदी बहिनीको घाँटी रेटेर विभत्स हत्या
काठमाडौं, ९ कात्तिक । भारतको पश्चिम विहारमा दुईजना दिदीबहिनीको घाँटी रेटेर विभत्स हत्या गरिएको छ । ७० र ७५ वर्षीया दुई बृद्ध दिदी बहिनीको घाँटी रेटेर विभत्स हत्या भएको हो ।
दूतावासमा हत्या गरिएका पत्रकारको शवका टुक्रा राजदूतको घरको बगैँचामा
Tuesday, October 23rd, 2018 Comments
एजेन्सी । अमेरिकामा हत्या गरिएका पत्रकारको शवको टुक्रा साउदी राजदूतको घरको बगैचामा फेला परेको छ । वासिङ्गटन पोस्टका पत्रकार जमाल खसोग्गीको शवका टुक्रा इस्तान्बुलस्थित राजदूतको घरको बगैँचाबाट बरामद भएको हो ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीका लागि खुसीको खबर, कात्तिक २१ वाट सुरु हुन्छ यस्तो नियम
Sunday, October 14th, 2018 Comments
काठमाडौं २८ असोज । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब फ्रि भिषा फ्रि टिकट पाउने भएका छन् । नेपाली कामदार निःशुल्क लैजानेबारे नेपाल र मलेसियाबीच कात्तिक १२ गते समझदारीपत्र (एमओ)
खप्परमा लेखेर ल्याएपछि कस्को के लाग्छ? निजि भ्रमणमा चन्द्रमामा जाँदैछन् एक जापानी
Wednesday, October 3rd, 2018 Comments
एजेन्सी । चन्द्रमामा पुग्ने रहर कसलाई हुदैन होला? तर सबै मानिसका सबै रहर पक्कै पुरा हुंदैनन् । एक व्यक्क्तिको सपना भने छिट्टै पूरा हुँदैछ । चन्द्रमामा निजी रुपमा घुम्न जाने पहिलो
मलेसियामा नेपालीकै ठगी धन्दा, मृतकको परिवारवाट समेत पैसा असुलेको खुलासा
Friday, September 28th, 2018 Comments
मलेसिया, १२ असोज । मलेसियामा गैरकानुनी रुपमा बसेका आप्रवासीहरुलाई देश छोड्न मलेसिया सरकारले अल्टीमेटम दिएको छ । जसका कारण गैरकानुनी रुपमा बसेका नेपालीहरु नेपाल फर्कन चाहन्छन् । सोही मौकाको फाइदा उठाएर
Friday, September 21st, 2018 Comments
एजेन्सी । १३ हजार वर्ष पुरानो बियर भेटिएको छ । इजरायल र अमेरिकाबाट संयुक्त रूपमा खटिएका अनुसन्धानकर्ताले यस्तो फेला पारेका हुन् । यो वियर नै विश्वको सबैभन्दा पुरानो बियर रहेको दावी